Imishini yasendlini Abenzi & Abahlinzeki - China Imishini yasendlini yaseChina
I-UV Cutting Board ...
Incazelo Model MS-08 / MS-09 ...
Ukusebenza okuningi ...
Incazelo Kukalwe Voltage 220V 6 ...
Incazelo Model MK-03 Voltage 220 ...
Incazelo Model MH-09 Voltage ...
Insect Ephathekayo R ...
Incazelo Model MH-08 Kukalwe P ...
Isibani Esibulala Omiyane
Yindawo enkulu ebamba omiyane ngesivunguvungu esincela omiyane. Akukho ukulimala emzimbeni womuntu ngenkathi kubulawa omiyane. Inikwa amandla yi-USB encane futhi iyakwazi ukugcwaliseka futhi kulula kakhulu ukuyikhipha ngaphandle.
I-Handheld Garment Steamer
Ingubo ebanjwa ngesandla ingubo ephathekayo yesitimela i-1000W ibheke phezulu nangokuvundlile umusi, ama-45s asheshayo wokushisa, i-auto-off, i-90ml yamathangi wamanzi aphezulu, ekhaya nokuhamba.
I-steamer encane nephathekayo ephathekayo enepuleti ye-ceramic, umzimba we-PC webanga eliphakeme. Uku-ayina okungu-2 koku-1 okomile nokumanzi okubili Push-button start for convenience user. I-110ml ithangi lamanzi elinamandla amakhulu, inga-ayina imizuzu eyi-8-10.
Ilambu Eliphendulayo Lokuphuza Izinambuzane
Imfashini futhi iyasebenziseka, ilungele ukusetshenziswa ngenkathi kujabulisa. Ukushaja i-USB, kungasetshenziswa noma yikuphi lapho uthanda khona. Ngoketshezi oluxoshayo, oluphephile ngokwemvelo futhi olusebenzayo, olulungele ukusetshenziswa komama nabesifazane. Ukukhanya okufudumele okufudumele ebusuku, okunethezeka nokunethezeka. Ukusethwa kwesikhathi samahora ayi-10. Kuxosha umiyane ngokuphumelelayo ngokwakha i-30m2 indawo yokuvikela yangaphakathi noma engu-3 metres.
Ubucwebe be-Ultrasonic Acashile
Ubucwebe be-ultrasonic cleaner obunemidwebo ehlukile yokubukeka, ukuthinta okubushelelezi njengesikhumba somntwana.
Ukusebenza okulula kwenkinobho eyodwa, ukuvala okuzenzakalelayo kwemizuzu emihlanu. I-12V voltage low-proof-grade & waterproof grade IP54, iphephile futhi ihlala isikhathi eside.Uklanywa komsindo ongaphansi, izinga lomsindo ngaphansi kuka-60dB. Usayizi omncane ophathekayo, olula ukuphatha, futhi ungasetshenziswa njengebhokisi lobucwebe. Faka isicelo sezibuko, ubucwebe, iwashi, izinsingo, amazinyo okufakelwa, nokunye.
I-4-in-1 multifunctional cordless mop mop kagesi enamaphayiphu amabili wokuphotha ikulethela isipiliyoni esisha sokugaya / ukuguqa / ukupholisha phansi. Okungenantambo, okulula ukuthwala ngebhethri elishajekayo le-3200mAh Lithium, izinqubo ezisebenza isikhathi eside.I-waxer floor & profisher: nge-300ml enkulu yethangi lamanzi noma i-wax agent.Umsindo ophansi ongaphansi kuka-30dB. Ikhanda le-Nano mop esikhiphekayo futhi elihlambekayo.Kuhle ukuhlanza amabala ahlukene. Ngokukhanyisa kwe-LED ukusiza ukukhanyisa izindawo ezimnyama lapho kudingeka.
Ukuhlanza phansi okungenantambo
I-multifunction washer cordless washer kanye ne-vacuum cleaner iyinhlangano yokuhlanza izinto ezintsha ezihlanganisiwe kufaka phakathi: Ukuwasha okumanzi nokuhlanza okomile ngasikhathi sinye; Ukuzihlanza ngokwakho nokushaja kususelwe kuhlanganiswe; Kuhlukaniswe amanzi ahlanzekile nethangi lamanzi elingcolile; Amandla okudonsa anamandla nokugeza okumanzi kuhlanganisiwe; Ingenantambo yakhelwe ngebhethri elikhiphekayo; Isikhathi esingu-17-30 min sokusebenza ezimeni ezijwayelekile / eziphezulu; Isikrini se-LED sibonakala ngesimo sokusebenza; Isibani se-UVC esakhelwe amabhaktheriya nokubulawa kwezimbungulu; Ukukhumbuza ukusebenza kwezwi, futhi kumnandi ukutholakala.